Solika Manandanja Hitan’ny ExxonMobil Eny An-dranomasin’i Goiana, Miteraka Fanontaniana Momba Ny Hoavin’ny Firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2016 15:00 GMT
Sambo mpitrandraka solitany an'ny ExxonMobil, Deepwater Champion. Sary an'ny mpampiasa flickr Michael Elleray, nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0.
Ny Alakamisy 30 Jona 2016 teo, niteraka resabe tao Goiana ilay goavana Amerikana amin'ny fitrandrahana solika, ExxonMobil, tamin'ny nanambaràny fa voamariny ny fiasianà solika iray an-dranomasina manana ‘kalitao iraisampirenena’. Manambara ny vokatra avy amin'ny lavaka fitrandrahany tao amin'ny vakimparitra Stabroek, tokony ho 120 maily (193 kilometres) miala amin'ny morontsirakìi Goiana ilay orinasa, solika mifatra 800 tapitrisa hatramin'ny 1.4 lavitrisa barila eo ho eo.
Nantsoin'i Raphael Trotman, minisitra misahana ny harena voajanahary ao Goiana, ho vaovao mahafinaritra izany, tamin'ny nilazàny tamin'ny News Source Guyana hoe “voasoratra ankehitriny ny hoavin'i Goiana ary heveriko fa hisy akony eo amin'izao tontolo izao izy ity.” Nampian'ny minisitra Trotman hoe nahazo ny fanohanana sy ny taridalana avy amin'ny fiarahamonina iraisampirenena ny fireneny, isan'izany ny governemanta Kanadiana, Amerikàna ary Meksikana, ny Fiombonambe Eoropeana ary ny Sekretarià-n'ny Vondron'ireo tany miteny sy mampiasa ny teny Anglisy.
Ilay lavaka fitrandrahana, fantatra amin'ny hoe Liza-2, no faharoa an'ny ExxonMobil any amin'ilay faritra, izay rakotra voam-pasika ahitàna lavaka madinika betsaka indrindra. Tamin'ny 2015, ny lavaka fitrohana voalohany, Liza-1, any amin'ny roa maily (3.3 kilometatra) eo ho eo miala amin'ny Liza-2, dia nahitany ihany koa tahirin-tsolika manandanja.
Ity fahitàna voalohany ity no nitondra ho amin'ny fipongaran'ny ady faritany teo amin'i Goiana sy Venezoela mpifanolo-boridindrina aminy, niaraka tamin'ny namoahan'ny filohan'i Venezoela, Nicolas Maduro, didim-panjakana iray tamin'ny 27 May 2015 izay nilaza fa azy ny ampahany betsaka amin'ny faritr'i Goiana sy ny fari-dranomasiny. Ity fahitàna solika farany ity dia toa vao mainka mampitombo izay fifandirana izay.
Ho an'i Venezoela, ilay fifandirana, izay efa hatramin'ny fitsirihana tany iray natao tamin'ny 1841, fony andron'ny governemanta Britanika mpanjanatany, dia tsy mbola voavaha velively araka ny tokony ho izy. Tazoniny ny vokatry ny fitsarana mpanelanelana tamin'ny 1899 izay nanome tsiny betsaka an'i Angletera, taorian'ny fisoloantena an'i Venezoela nataon'ny filankevitra Amerikàna tamin'ilay fifandirana nolazaina fa namofompofona tsindry avy amin'ny Britanika tamin'ilay fanapahankevitra. Avy eo, ny taona 1966, nosoniavina ny Fifanarahan'i Zeneva ho andrana hampitsaharana ny ilay adihevitra; ara-teknika dia mbola manankery izy io, na mbola tsy nisy vahaolana hita aza.
Tsy mbola voatrandraka ny ankamaroan'ireo rano manodidina an'i Goiana. Araka ny lazain'ny tantara iray ao amin'ny Forbes mitanisa ny Exxon CEO Rex Tillerson, ilay fandalinana 3-D amin'ny alàlan'ny fandefasana onjampeo izay nampanaovin'ny Exxon tao amin'ilay faritra no midadasika indrindra teo amin'ny tantarany — “mitovitovy amin'ny in-1.400 amin'ny haben'ireo vakim-paritra ao amin'ny Golfan'i Meksika”.
Ny fandalinana 3-D amin'ny alàlan'ny fandefasana onjampeo dia fomba fitrandrahana ara-jeofizika ampiasaina betsaka amin'ny indostran'ny solika sy entona. Mamorona onjampeo izy io (onde de choc na onde sismique ho an'ny teny frantsay) mba handinihana ny toetoetry ny tany ary misy ahiahy hoe ny tabataba aterak'io loharanonà onja io amin'ireo zavamiaina an-dranomasina dia manelingelina na manohintohina mihitsy ny fiainan'ny biby, indrindra fa ireo ‘cétacés ‘ toy ny trozona, ny fesotse ary ny ‘marsouins’ izay mampiasa feo mba hifandraisany izy samy izy.
Niteraka fanehoankevitra anjatony maro tao amin'ny Facebook ilay fanambaràna fahitàna solika, ahitàna ireo teratany maro be avy ao Goiana mankasitraka ilay fahitàna ary izay hoentiny ho fampandrsoana ny toekaren'i Goiana. Toy ny napetrak'i Seemouan Phillips, mpampiasa Facebook :
Toy ny hoe rakotry ny fitahiana izany isika
Saingy velom-panahiana ny hafa ny amin'ny mety hahitàn'ny olompirenena tombony amin'izany.
Nanoratra i Suzanne Defreitas-Johnson, mpampiasa Facebook, hoe :
Ummmm aiza ho aiza ao anatin'ity lahatsoratra ity araka izany no milaza fa hahita tombony amin'io fahitàna io i Goiana? Sa ity governemanta vaovao ity hanao toy ireo mpitondra hafa rehetra ka hamela ireo olona ireo ho tonga sy haka tsy misy tambiny koa?
Samantha Mathurin-Springer nanampy hoe :
Antenaiko fa ho fantatry ny governemanta eto Goiana ny hoe mety hisy fiantraikany ratsy na tsara ho an'i Goiana io, arakaraky ny fomba hitondrany azy. Betsaka no ho liana amin'ny fampiasana vola aty Goiana. Antenaiko fa hanao fandinihana tsara mifanaraka amin'ny lalàna ihany koa ry zareo alohan'ny hanaovany sonia izay rehetra fifanarahana eo.. Ny governemanta teo aloha (indrisy) toa sahala amin'ny nivarotra ny firenena. Aza averina.
Ity dia tohin'ny fampitandremana iray nataon'ny vondrom-piarahamonina sivily “Policy Forum Guyana” hoe takian'ny firenena ny fiovàna ifotony mba hanarahana maso amin'ny fomba mahomby ireo harena voajanahary — ary io dia mitaky fiovàn'ireo fotodrafitrasa izay lazain'ilay vondrona fa tsy manana ny toerany ao mihitsy ny “fifanarahana fiaraha-mitantana”.
Ny fanambaràny dia nataon'ilay vondrona tamin'ny lanonana fanokafana ny fihaonambe ho fametrahana ilay vondrona iaraha-mandinika (MSG) mifandraika amin'ny Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) – Hetsika hisian'ny mangarahara amin'ny indostrian'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Miomana ny hampihatra ny EITI amin'ny volana Novambra i Goiana, ary ny fametrahana ny MSG dia fanalahidin'ny haha-mpikambana azy ao anatin'io. Mampiroborobo ny fahatongavantsain'ny daholobe momba ny fomba fitantanan'ny firenena ny solika, entona ary ireo harena mineraly ao aminy ilay fandraisana an-tànana izay manana ny foiben-toerany any Norvezy.
Tsy vao izao no voalohany nisy ahiahy nipoitra momba ny fitrandrahana solika ao amin'ny firenena. Tamin'ny Novambra 2015, niatrika fiampangàna ny governemanta ao Goiana, izay nilazana fa tsy ananan'ny fanjakana fahefana ny hanaraka maso samirery ny fanatanterahan'ny ExxonMobil ireo fepetra ara-tontolo iainana. Nipoitra ny ahiahy taorian'ny nilazana hoe mampiroborobo sy mamatsy vola ny fandàvana ny sty fisian'ny fiovàn'ny toetrandro ny ExxonMobil.
Tamin'izany fotoana izany, Trotman, minisitry ny Fitantanan-draharaha tamin'izany, dia niteny fa nampitomboina ny fahefan'ny Environmental Protection Agency (EPA) – masoivoho mpiaro tontolo iainana – ary ninoan-dry zareo fa mety ho dimy hatramin'ny folo taona izay fahefany izay.
6 andro izaySt. Vincent & the Grenadines
7 andro izayTrinite sy Tobago